गुठी विधेयक फिर्ता, आन्दोलनकारीमा अझै आशंका « News of Nepal
आज राजधानीमा बृहत् खबरदारी सभा
राजधानीमा आज बुधबार गुठी विस्थापन गर्ने विधेयकका विरुद्ध लाखौंको जनप्रदर्शन हुने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारले विवादास्पद सो विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। तर, गएको १० दिनदेखि निरन्तर प्रहरी प्रशासनको दमनका बाबजुद यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका राजधानीबासी आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्। उनीहरू भन्छन्– ‘विरोध सभा अब बृहत् खबरदारी सभामा परिणत हुनेछ, तर आन्दोलन रोकिन्न।’
सरकारले जनताको चाहनालाई स्वागत गर्दै विधेयक फिर्ता लिइएको जस्तो जनपक्षीय भाषा प्रयोग गर्न सकेको छैन। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुठी विधेयक फिर्ता लिएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताएर यस विषयलाई हल्कारूपमा चित्रण गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘माननीय मन्त्रीले केही सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न, विज्ञहरूको रायसुझाव लिनुपर्ने देखिएको र विधेयकबारे भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको भन्दै केही समयअघि विधेयक फिर्ता लिनुभएको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ’ भनेर पत्रकारलाई जवाफ दिनुभएको थियो।
सरकारको व्यवहार विश्वास गर्न लायक देखिएको छैन। उसले प्रयोग गरेको भाषा आपत्तिजनक छ। हामी धर्म र संस्कृतिको रक्षाका लागि आन्दोलनमा लागिरहेका छौं, तर सरकार हामीलाई सामन्ती भनेर गाली गरिरहेको छ। के नेपालको पहिचान जोगाउन आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी गालीको भाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ?
सरकारले जति पनि विधेयक ल्यायो भूमिगत शैलीमा, अपारदर्शी तरिकाले। नेकपाको सरकार छ, त्यसले गुठी समाप्त पार्ने विधेयक ल्याउँछ तर त्यसकै शीर्ष नेता झलनाथ खनाल आफूलाई केही थाहा नभएको सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। के यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर मात्र यस्ता विधेयक आउनुपर्ने होइन ? यसरी भूमिगत शैली अपनाउनु एकमात्र कारण हो भूमाफियालाई अवसर दिनु। विगत १० दिनदेखि के सामन्ती र भाडाका मान्छेले आन्दोलन गरेका हुन् ? सरोकारवालासँग परामर्श गरेर विधेयक ल्याएको भए त हाम्रो पनि त्यसमा स्वामित्व हुने थियो, त्यो हो नि लोकतान्त्रिक अभ्यास।
सरकारले हामीलाई भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ, ऊ गुपचुप विधेयक बनाउँछ, हामी भ्रम सिर्जना गर्छाैं, कस्तो आपत्तिजनक टिप्पणी। भ्रम सिर्जना त उसले गर्यो पारदर्शी नभएर। हामी विधेयक आउनुहुन्न, गुठीको जग्गा व्यवस्थित गरिनुहुन्न भन्दैनांै, तर यसरी गुपचुप शैली अपनाएर हुन्न। सरोकारवालालाई बोलाएर सरकारले बृहद् छलफल गरोस्, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं।